डिसेम्बर २० मा करिनाले छोरा तैमुरको पहिलो जन्मदिन भव्यरुपमा मनाउने तयारी गर्दै - Everest Dainik - News from Nepal
डिसेम्बर २० मा करिनाले छोरा तैमुरको पहिलो जन्मदिन भव्यरुपमा मनाउने तयारी गर्दै
तैमुरका भाईबहिनी यिनै हुन्, कपुर र पटौदी खानदानसँग यस्तो छ सम्बन्ध
मुम्बई, पुस ४ । बलिउड क्षेत्रकी चर्चित अभिनेत्री करिना कपुरको छोरा तैमुर अली खानको यही डिसेम्बर २० तारिखका दिन पहिलो जन्मदिन मनाउने भएको छ ।
यसको लागि सैफ अली खान–करिना कपुर र उनको परिवार पटौदी पुगेका छन् । बताएअनुसार तैमुर सैफको तेस्रो सन्तान रहेको छ । उनको जेठी श्रीमती अमृताको छोरी सारा र छोरा इब्राहिम अली खान रहेको छन् ।
याे पनि पढ्नुस सोमबारदेखि चलचित्र ‘स्टुडेन्ट अफ दि इयर’को सिक्वेलको सुटिङ सुरु
त्यस्तै, सैफ र करिनाको छोरा तैमुर कपुरको ठूलो खानदानबाट टाढा रहेको छ । तैमुरको पहिलो जन्मदिनमा बताउने भएको छ कि कपुर र पटौदी खानदानसँग जोडिएका सदस्यको बारेमा र उनीहरुसँग तैमुरको सम्बन्ध हुने छ ?
बताएअनुसार तैमुरको पहिलो जन्मदिनमा शाहरुख खान छोरा अबरामको साथ र करन जौहर ट्विन्स यश र रुहीको साथ पार्टीमा देखिने भएको छ भने तुषार कपुर र उनको छोरा लक्ष्य पनि सामेल हुने भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस साउथ चलचित्रमा सुपरस्टार अमिताभको लुक्स सार्वजनिक !
ग्राण्ड परिवार रणधीर कपुर, बबिता, शर्मिला टैगोर र सोहा–कुणालको छोरी इनाया नाउमी खेमू पनि पुग्ने भएको छ ।
तैमुरको २०१६ डिसेम्बर २० मा मुम्बईको ब्रीच कैंडी हस्पिटलमा जन्म भएको थियो । तैमुरको जन्म क्रिमसम डे कै आसपास भएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस आमिरको दंगल : भारतमा भन्दा चीनमा लोकप्रिय
ट्याग्स: bollywood, karina kapoor